Root vegetable | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Root vegetable
Sweet Potato - Potipotiny matevina
Ny voankazo mamy dia zavamaniry tropikaly iray izay mamimamo kely toy ny papyrus mamy. Na dia tany amin'ny faritra atsimo aza izy io, dia nijanona tsara teo amin'ny lalambe afovoan-tany. Mandritra ny fitomboany, dia miparitaka eny amin'ny tany izy, toy ny voaloboka, matevina eo amin'ny fakany. Izy ireo dia ireo sokitra ireo ary azo angonina, mahandro sy mihinana.
Ny soa sy ny loza ary ny fananana ny vokatra
Karazam-bolo no tena ampiasaina amin'ny fisakafoanana eran-tany. Ny voankazo dia ankoatra ny salady, sotro, vary, fary. Avy amin'ny ranom-boasary, izay faharoa malaza amin'ny tazo. Ankoatra ny fangatahana kulinarina, ny karaoty dia ampiasaina hanamafisana ny vatana, satria manana toetra mahasoa izay mitondra anjara biriky amin'izany.
Ny karazana parsnip mahazatra indrindra
Pasternak amin'ny endriny sy ny endriny dia mitovitovy amin'ny karazany, fotsy fotsiny izy io ary misy sakafo fanampiny. Manana vokatra manasitrana amin'ny alahelon'ny alahelony koa izy io, mandrisika ny fahaketrahana, dia diavetika. Manamaivana ny vato ao amin'ny ratra sy ny voa izy, mampihena ny kohaka, mikarakara aretim-behivavy ary manodinkodina.
Ny karazana parsley malaza miaraka amin'ny famaritana
Androany, angamba, tsy misy ny zaridaina toy izany izay tsy ahafahan'ny parsley. Ao amin'ny ravina sy fotsy, dia toy izany koa ny raviny. Samy ampiasaina amin'ny sakafo ny iray sy ny iray hafa, ary koa amin'ny tanjona medika sy kosmetika. Ny karazana zavamaniry tsara indrindra dia mihevitra ny lahatsoratra. Ny voankazo faran'izay tsara indrindra amin'ny parsley Parsley dia zavamaniry marefo ao amin'ny fianakaviana hôpitaly.
Ny famolavolana tsotsotra iray ao amin'ny teti-dratsinao dia tsy miteraka olana. Ny fakan-dity dia tsy mahasosotra ary manome vokatra lehibe. Ankehitriny, ny latabatra sy ny karazan-tsakafo dia mihalehibe. Ny fisafidianana tranokala sy tany ho an'ny ramboty dia maniry ny hafanana mafana ary ny hafanana mahery dia manimba azy fotsiny. Noho izany, ho an'ny fakan-tsakafo mety tsara amin'ny penombra, ka nandritra ny hafanana dia voaro amin'ny masoandro.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Root vegetable